ယုန်လေး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ယုန်လေး
Category Archives: ယုန်လေး
[Released: Sep 22, 2013. Genre: Hip-Hop/Rap. File: Mp3] ၀၁။ I Am Myanmar ၀၂။ လူကြမ်းတစ်ယောက်အသဲကွဲခြင်း ၀၃။ အမှိုက် ၀၄။ အရင်လိုနှစ်ယောက်တည်း ၀၅။ သွားလိုရာသွားပါ (Stupid) ၀၆။ Bee Jal Party ၀၇။ အိမ်ပြန်ချင်နေပြီ ၁၈။ Hard Core Show ၀၉။ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး ၁၀။ ဘီယာဝီစကီဘူဖေး ၁၁။ အပေါ်ယံအချစ် ၁၂။ ဟေ့ကောင်မလေး ၁၃။ Underground ဘဝ ၁၄။ ဆုတောင်းတွေပြည့်ချင်တယ် [Download Whole Album – 59.14MB] [Download Whole Album – 59.14MB] Password: … Continue Reading →
September 29, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ယုန်လေး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
၀၁။ သေနေ့စေ့တဲ့နေ့ – ယုန်လေး ၀၂။ ဒုတိယလဒုတိယအပတ် – ယုန်လေး၊ ဆူဇီ ၀၃။ လမ်းမပေါ်ကဘုရင် – ရသ၊ ကြက်ဖ ၊ G-Tone ၀၄။ ကောင်းသောည – ထိုက်ထိုက် ၀၅။ ဒီည – အယ်ဇော် ၀၆။ GOD – G Family ၀၇။ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး – ယုန်လေး၊ ချမ်းချမ်း ၀၈။ မြေအောက်ဘုရင် – စေတန်၊ ဒိုးဒိုး ၀၉။ မိုးစက်လေး – ဂျစ်တူး ၊ နီနီခင်ဇော် ၁၀။ မပျော်နိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေ – နဒီ ၁၁။ အသည်းကွဲဒိုင်ယာရီ – AMH, မိုးထက် ၁၂။ … Continue Reading →
January 22, 2012 MMA အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) ရသ နီနီခင်ဇော် ချမ်းချမ်း ယုန်လေး ကြက်ဖ G Tone New Myanmar Albums 1 Comment
(1)ALL STARZ (J ME &CYCLONE&ယုန်လေး) Download (2)မသိခဲ့ပါ (ဂျောက်ဂျက် &ယုန်လေး) Download (3)နမိတ်ကောင်း (ရသ&နတ်ကျော်) Download (4)စဉ်းစား (ဂျေမီ) Download Download Link Sharebee Link
October 29, 2009 chineseboy ရသ ဂျောက်ဂျက် ယုန်လေး J-Me Unreleased Albums5Comments